Xayeysiisyada muranka dhaliyay ma fure u yihiin dhisidda summadaha waxtarka leh? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Xayeysiisyada muranka dhaliyay ma fure u yihiin dhisidda summadaha waxtarka leh?
Xayeysiisyada muranka dhaliyay ma fure u yihiin dhisidda summadaha waxtarka leh?
Waa xaqiiqo fudud in muranku madax isu rogo. Waxay soo jiidataa dareenka dadka waxayna si dhab ah u dalbanaysaa inay waqtigooda siiyaan.
Dabcan, muranku wuxuu si qoto dheer dadka uga xumaan karaa ama ku dhiirigelin karaa inay si qoto dheer uga fikiraan mawduuc.
Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer waxay helaysaa dadwaynaha inay joojiyaan waxay samaynayaan wakhti dheer oo ku filan si ay u fariistaan ​​​​oo ay ogaadaan.
Laakin ma runbaa waxa ay ka yiraahdeen dacaayad xun - in aysan dhab ahaantii jirin wax caynkaas ah? Dareenka lama huraanka ah miyaa xayaysiis muran dhaliyay kuu keenayaa khatarta ka iman karta sumcadda shirkaddaada?
Halkan waxaa ah eegno dhow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad si dhab ah u fahamto xayaysiisyada muranka dhaliyay fikrad ahaan oo aad go'aansato inay tahay doorashada saxda ah ee ololahaaga xayaysiinta dhijitaalka ah.
Waa maxay Xayeysiis Muran?
Ujeedada xayaysiisku waa in lagu iftiimiyo ganacsigaaga si sumaddaadu u gaadho dhagaystayaasha, u kasbato macaamiisheeda, oo u koraan.
Xayeysiiska guusha leh wuxuu kor u qaadaa wacyiga alaabtaada iyo adeegyadaada. Intaa waxaa dheer, waxay sawirtaa sawir xiiso leh oo ku saabsan sida ay noloshu noqon karto haddii astaantaadu ay ka mid tahay.
Dhanka kale, khilaafku wuxuu ku saabsan yahay in wax la ruxo. Waxay kicisaa shucuur xooggan waxayna dhiirigelisaa sheeko kulul, haddaysan ahayn doodo dhab ah.
It hubaal amar ku bixiya dareenka dadka, hadday jecel yihiin waxay arkayaan iyo waxay maqlaan iyo haddii kale.
Iyo, liddi ku ah caqiidada caanka ah, khilaafku had iyo jeer ma xuma. Mararka qaarkood waa barta boodada ee wada sheekeysiga miraha leh iyo xiriiryo cusub oo faa'iido leh.
Xayeysiiska muranka dhaliyay ayaa ka faa'iidaysanaya awoodda aan la dafiri karin ee muranka si loogu qasbo daawadayaasha inay fiiro gaar ah u yeeshaan astaanta ka dambeysa.
Dhab ahaantii waa dammaanad in xayeysiis muran dhaliyay ay dadka ka dhigi doonaan inay ka hadlaan summadaada, laakiin haddii aad jeclaan lahayd iyo haddii kale waxa ay sheegayaan waa arrin kale oo dhan.
Ma habboon tahay in calaamad si ula kac ah u abuurto muran?
Dheelitirnaanta had iyo jeer waxay ahayd furaha suuq-geynta ee shaqeeya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira khad fiican oo u dhexeeya ka sooca inta kale ee qaylada cad si togan iyo suurtogalnimada samaynta fikrad khaldan dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Xariiqdaasina aad ayay uga sahlan tahay in la gudbo marka loo eego suuqgeynyo badan ayaa garwaaqsada ilaa ay goori goor tahay.
Haddi laga gudbo xariiqdaas dhulka lagu muransan yahay waxay wax badan ku xidhan tahay shirkadda ka dambaysa xayaysiiska, iyo sidoo kale yoolka ugu dambeeya ee ololaha summaynta shirkadda.
Waa kuwan dhawr waxyaalood oo ay tahay in la tixgeliyo marka la go'aaminayo iyo in kale aad calaamada suulasha waa in ay dhex gelisaa biyaha muranka dhaliyay.
Si fiican u ogow qofkaaga
Si loo yareeyo khatarta ololaha xayaysiiska ee ka soo horjeeda hadhuudhka, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u ogaato dhagaystayaashaada (iyo sida ay uga falceliyaan waxyaabaha)
Noqo mid geesinimo leh
Ka fikir sida aad diyaarka ugu tahay inaad isku daydo inaad ka soo horjeedo hadhuudhka xitaa haddii ay tahay ma sameeyo si fiican u shaqee. Marka xayaysiis kor u qaadida sunniyaha ay khaldan tahay, dib u noqoshada ayaa inta badan ka dhigi karta xamaasad aad u xun.
Xariif ku noqo
Warshadaha qaarkood waxay si cadaalad ah isugu xidhaan muran oo way ku koraan. Fashion-ku waa hal tusaale oo aad u wanaagsan.
Sug waqtiga saxda ah
Muranka ayaa sidoo kale ku habboon noocyada waaweyn ee awood u leh inay ka naxiyaan dhowr qof.
Summadaha waaweyni waxay leeyihiin dhegaystayaal waaweyn oo dhisan oo cafiyi doona tallaabo qaldan.
Dhanka kale, ganacsiyada yaryar ayaa laga yaabaa inay helaan wakhti aad u adag oo soo kabasho ah, gaar ahaan haddii ay weli raadinayaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah.
Xayeysiisyada muranka dhaliyay waxay noqon karaan hab cajiib ah oo lagu soo jiito dareenka astaantaada.
Si kastaba ha ahaatee, weli waa khatar, gaar ahaan haddii shirkaddaadu aad u yar tahay ama haddii kale ay weli hesho cagaheeda.
Khataraha waxay kaa caawin karaan sumaddaada inay madax noqdaan, laakiin waa inaad had iyo jeer hubisaa inay yihiin kuwo la xisaabiyay.
Xayeysiisyada Muranka Badan Ee Shaqeeya
Marka xayaysiisyada muranka dhaliyay ay wax hagaagaan, waxay dhalin karaan orod guri oo halis ah.
Kuwa soo socdaa waa tusaalayaal xusid mudan oo ah xayaysiisyada ka dhanka ah hadhuudhka kuwaas oo aan kaliya ka helin dadka inay hadlaan laakiin u sameeyay mowjado siyaalo sax ah oo dhan.
1. Nike: Riyo waalan
Colin Kaepernick wuxuu noqday shaqsi muran badan dhaliyay isagoo jilba joogsaday intii lagu jiray heesta calanka ee xilli ciyaareedkii 2016 NFL.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u samaynayay sabab weyn - si uu uga istaago sinnaan la'aanta jinsiyadeed. Inkasta oo doorashadaas ay si qurux badan u soo afjartay xirfaddiisa kubbadda cagta, dad badan ayaa u riyaaqay Kaepernick geesinimadiisa iyo daacadnimadiisa.
Ololaha waalan ee Nike's Dream wuxuu ahaa mid ku saabsan u muujinta taageerada ciyaartoyda cajiibka ah ee dadaalka ay ugu jiraan inay ka dhigaan riyooyinkooda ugu weyn.
Colin Kaepernick iyo sida uu ugu heellan yahay arrimaha bulshada ayaa la soo bandhigay, taas oo runtii dhalisay muran.
Laakiin sidoo kale waxay dhiirigelisay malaayiin iyo waxay kor u qaaday iibka Nike boqolkiiba 31 cajiib ah.
2. Lane Bryant: #Jidhkan
Lane Bryant waxa ay caan ku tahay nakhshadeynta dharka quruxda badan ee moodada ah ee loogu talo galay dumarka baaxadda leh, sidaa awgeed xayaysiis ka hadlay arrimaha muhiimka ah sida ceebaynta jidhka iyo isku kalsoonaanta ayaa u muuqatay mid aan caqli-gal ahayn.
Xayeysiiska summada ee #ThisBody ayaa soo bandhigay moodooyin cabbirkoodu dheer yahay oo soo bandhigay dharyo kala duwan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah lebbiska Lane Bryant, iyadoo ka hadlaysa sababta ay u jecel yihiin oo ay u dabaaldegaan jidhkooda.
Labada ABC iyo NBC labaduba waxay dhaawaceen soo jiidashada xayeysiiska si ay u muujiyaan maqaarka aad u badan ee telefishanka (in kasta oo aysan ahayn wax khatar ah oo ka badan xayeysiisyada la midka ah).
Laakin Lane Bryant waxay garab istaagtay shaqadooda, diidmada in la sameeyo wax ka beddelka la codsaday taa beddelkeedana lagu sii daayo dhammaan kanaalada warbaahinta bulshada ee astaanta.
Si dhakhso ah ayey u gashay fayras waxayna abuurtay jawaab celin aad u wanaagsan, iyada oo ku guulaysatay Lane Bryant taageerada taageerayaal cusub oo aan tiro lahayn iyo macaamiisha mustaqbalka.
3. Heineken: Aduunyada Apart
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in qofka caadiga ah uu si cajiib ah u dareemayo si adag oo ku saabsan aaminsanaanta siyaasadeed.
Markaa markii Heineken uu go'aansaday inuu wax ka qabto fikradda kala duwanaanshaha siyaasadeed isagoo adeegsanaya xayeysiiskooda Adduunka Apart, arrimuhu waxay ahaayeen kuwo xiiso leh.
Xayeysisku wuxuu ka kooban yahay dad aan kala sooc lahayn oo la isku lammaaniyay oo la waydiiyay inay soo ururiyaan baar saxaro ah koox ahaan.
Ka dib markii ay isku xidhxidheen hawshaasi, waxa la ogaaday inay qabaan aragtiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda.
Oo markii la sii weydiiyey inay fadhiistaan ​​oo ay ka wada hadlaan khilaafkooda biirka, mid kasta oo ka mid ah lammaanaha ayaa ku heshiiyey, natiijooyin cajiib ah.
Natiijadu waxay noqotay xayaysiis si guul leh ugu xujeeyay dadka inay khilaafaadkooda dhinac iska dhigaan oo Heineken ku rinjiyeeyay iftiin qurux badan ururka.
Xayeysiis Muran Leh Oo Aan Shaqeyn
Suuq geeyaha xariif ah waligiis ma rabo in uu lumiyo aragtida xaqiiqda ah in iyada oo muranku uu dhalin karo nooca buuqa ee ka dhasha xariiqda hoose ee caafimaadka leh, waa wax aad u fudud in aad u fogaato jihada kale.
Haddaba halkan ka daawo dhawr xayaysiis oo muran badan dhaliyay oo si xamaasad leh u galay dhul si togan u qalma.
1. Furaash mucjiso ah: Dhismayaal mataano ah
Iibinta tafaariiqda iyo ciidaha waddaniyadda waxay u janjeeraan inay gacma-gacanta ku socdaan, markaa dadku waxay filayaan inay maqlaan wax ku saabsan soo jeedinno cajiib ah oo ku saabsan munaasabadaha sida Maalinta Ciiddamadda ama Maalinta Shaqaalaha.
Taasi waa sababta ay shirkad yar oo furaash ah oo maxalli ah oo la yiraahdo Miracle Furaash ay u maleyneyso in iibinta Sebtembar 11-keeda ay tahay fikrad wanaagsan.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahayn iibinta lafteeda tan keentay arrin. Waxay ahayd xayaysiiskii u dhignaa ee muujiyay laba xidhmo oo furaashyo ah oo is dulsaaran iyo nin dukaan iibiya oo ku qaylinaya, "Weligay ma ilaawi doono."
Markii ay dhegaystayaashu u arkeen xayeysiisku mid meel ka dhac ah oo aan dareen lahayn, Miracle Furaash ayaa ku dhaawacmay dhaleecayn aad u daran, waxa lagu qasbay inay ka baxaan ganacsiga - sheeko digniin ah oo ku saabsan waxa dhici kara marka muranku xumaado ganacsiyada yaryar.
2. Pepsi: hadda noolow
Masiibada Pepsi ee Live for Now xayeysiisku waa caddayn adag oo ah in aysan ahayn ganacsiyada yaryar oo kaliya kuwa mararka qaarkood u hela khilaaf si ceeb ah.
Xitaa noocyada waaweyn ee loo isticmaalo in lagu dhaliyo guulo culus ayaa gabi ahaanba seegi kara calaamadda.
Ka dib oo dhan, yaa illoobi kara macnaha dhawaaq-dhego-la'aanta ah in daasadda Pepsi (iyada oo xoogaa caawimo ah ka timid Kendall Jenner) ay tahay dhammaan waxa ay u baahan tahay si loo soo afjaro arrimaha caddaaladda bulsheed ee khatarta ah ee maanta adduunka dhibaya?
Xayeysiiskani waxa uu sameeyay taariikh, maaha in la hagaajiyo safka hoose ee Pepsi, laakiin waxa ay shan jeer kor u qaadeen hoos u dhaca YouTube ee codadka
Dhab ahaantii, xayeysiisku wuxuu keenay nacayb aad u badan, Pepsi waa inuu hoos u dhigaa saacado yar ka dib markii uu dhajiyay.
Ciyaartoyga caanka ah ee cabitaanka fudud ayaa qaldamay iyada oo xooga saaraysa badeecadooda marka loo eego arrinta miisaanka leh ee adduunka ee ay taabato ganacsigu, taas oo ka dhigaysa wax kasta oo u muuqda mid faaruq ah oo iskaa wax u qabso ah.
3. Dalka oo dhan: Wiil
Xayeysiiskan oo u muuqda mid soo jiidasho leh oo ka socda dalka oo dhan ayaa waxa ka muuqda wiil yar oo qurux badan oo u muuqda inuu u baahan yahay inuu ka gudbo arrin xishood leh.
Sawirka muuqaalka ah ee soo jiidashada leh waxaa weheliya codka wiilka oo faahfaahinaya dhammaan waxyaabaha cajiibka ah ee uusan waligiis awoodi doonin inuu noloshiisa ku sameeyo.
Ka dibna si lama filaan ah, waxaa la ogaaday in wiilku aanu xishood lahayn. Taa beddelkeeda, wuu dhintay, sidaas darteed ma awoodo inuu waligii weynaado.
Fikradda ka danbaysa xayaysiiskani waxa ay ahayd in lagu iftiimiyo waxa ay noqon karaan arin halis ah shilalka caruurnimada iyo sida ay muhiimka u tahay in laga ilaaliyo qoyskaaga waxyeelada iman karta.
Si kastaba ha ahaatee, dhagaystayaashu waxay u arkeen xayeysiisku inuu yahay isku day dareen la'aan ah si looga faa'iidaysto arrin aad xasaasi u ah si looga cabsiiyo inay iibsadaan caymiska.
Isku soo wada duuboo: Sare u qaad fanka xayaysiisyada muranka dhaliyay ee natiijooyinka hela
Inkasta oo muranku uu mararka qaarkood noqon karo maraqa sirta ah ee ka qaada xayeysiisyada wanaagga ilaa halyeey, waxaa jira farshaxan fiican oo loo isticmaalo si caqli-gal ah.
Sidoo kale waa mid ka mid ah farsamooyin badan oo wax ku ool ah oo ka dhigi kara kooxdaada suuq-geyneed sayidkii xayeysiiska taasoo dhalinaysa natiijooyin cajiib ah.
Mararka qaarkood talo khabiir yar ayaa ah waxa kaliya ee loo baahan yahay si loo sameeyo isbeddelka.
Codso gelitaankayaga bilaashka ah demo waxqabadka ad maanta jidka gudaha waxa loo baahan yahay si loo gaaro natiijooyin suuqgeyn aan la mid ahayn.
Baro sida loo qabsado xogta wax-ku-oolka ah, u wanaaji ololayaashaada beddelaad, u abuurto nuxur is-dhexgal, iyo in ka badan!
Xadka Xadka Lifaaqa Gmail: Sida faylal waaweyn loogu diro iimaylka (4 siyaabood oo fudud)
63 Qaababka Suuqgeynta Bilaashka ah ee aadan ogeyn inaad u baahan tahay